Dumarka in lagu xad gubdo ayaa kala weyn Akshay Kumar joojinta shaqada filim 200 Crore miisaaniyad ah xambaarsan!!! – Filimside.net
Dumarka in lagu xad gubdo ayaa kala weyn Akshay Kumar joojinta shaqada filim 200 Crore miisaaniyad ah xambaarsan!!!
October 12, 2018 Zakarie Abdi
Taariikhda: October 12, 2018
Superstar Akshay Kumar iska hadlo ee hadalkiisa waa inuu ficil la socdaa waana sababta keentay in gabi ahaanba filimka Housefull 4 oo miisaaniyad 200 Crore ($30m) xambaarsan shaqadiisa la joojiyo!
Kumar ayaa subaxdii hore saakay qoraal rasmi ah bartiisa Twitter-ka sood dhigay kuna dalbaday amar ahaan in shaqada filimka Housefull 4 la joojiyo madaama Director-ka filimkan Sajid Khan lagu eedeeyay inuu tacadi kula kacay atirishoyinka aan awooda laheyn Saloni Chopra & Rachel White.
Haddaba Kumar amarkii uu bixiyay wuu hirgalay waxaana dhacday in shirkada Nadiadwala Grandson ee Sajid Nadiadwala madax u yahar inay durba Director Sajid Khan ka saartay filimka Housefull 4 sidoo kalena Sajid Khan isagana bartiisa Twitter-ka ku cadeeyay inuu shaqada Housefull 4 joojiyay ilaa ka cadeeneyso eedeynta lagu heesto.
Sidoo kale filimka Housefull 4 jilaayaashiisa waxaa ka mid ah Nana Patekar oo isagana lagu heesto xad gudub fara xumeyn ah inuu u geestay atirishada Tanishri Dutta wuxuuna Akshay Kumar dalbaday in Nana xitaa lasoo cadeeyo arinkiisa markaas kadib shaqada Housefull 4 la isugu soo laabto.
Housefull waxaa wada jilayaan Akshay Kumar, Bobby Deol, Retiesh Deshmukh, Kriti Sanon, Pooja Hedge iyo Kriti Kharbandha waxaana xusid mudan in 70% filimkan shaqadiisa la qabtay oo lagu duubay London iyo saxaraha Rajashthan.
Balse Akshay Kumar shaqada mashruucaan 200 Crore xambaarsan dib uma bilaabi doono ilaa Sajid Khan iyo Nana Patekar laga cadeenayo dambiga loo heesto run iyo been waxa uu yahay waxaana wax walbo Kumar kala weyn dumarka tacadi loo geesto in la qar qariyo.
Waxaa Aqrisay 1,515